कोरोना लागेका बिरामी निको हुनु भनेको के हो?
२०७६ फाल्गुण २० मंगलबार १०:२०:२८ प्रकाशित
एजेन्सी- काेरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण चीनको वुहान हुँदै अहिले विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। काेराेना जनावरबाट मानिसमा र पर्याप्त जानकारीको अभावमा विश्वभरि फैलिएकाे हाे।
कसरी फैलन्छ यो भाइरस?
न्यू इङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनको एक रिपोर्टअनुसार कोभिड-१९ को संक्रमणको उच्च जोखिम मानिसमा यसका लक्षणहरू देखिन थालेपछि क्रमशः हुने उल्लेख छ। कोरोना भाइरस फ्लूजस्तै गरी फैलने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
दक्षिण कोरिया ३७३६
सान मारिनो १
कसरी गर्ने तयारी?
मास्क लगाउनु आवश्यक छ?
कहिले होला पूर्ण नियन्त्रण?
‘यसको बारेमा केही पत्ता लागि नसकेकाले यसले यही नै गर्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन।’ म्याकगियरले भने‚ ‘यो कसरी फैलन्छ भनेर यकीन गरेर भन्न नसकिने स्थिति छ। कोरोना पनि अरू नियमित फ्लूजस्तै भएको तर यो कसर फैलन सक्छ भन्ने विषयमा अझै पनि यकीन गर्न सकिएको छैन।’